Nweta Lost Ozi ịntanetị na Outlook maka mmekọrịta ekwentị ekwentị
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Nweta Lost Ozi ịntanetị na Outlook maka mmekọrịta ekwentị ekwentị
Nweta Lost E-mail na ihe nlere anya n'ihi mmekọrịta ekwentị mkpanaaka!
Mgbe ị gakọrịta ekwentị gị na Outlook na gị Outlook na desktọọpụ, na software dị ka ActiveSync ma ọ bụ Windows Mobile Ngwaọrụ Center, mgbe ụfọdụ ị ga-atụfu ụfọdụ ozi ịntanetị na ihe ndị ọzọ. A na-ehichapụ ozi ịntanetị mbụ na ihe ndị sitere na Outlook na desktọọpụ, mana ọ pụtaghị na ekwentị mkpanaaka gị. Nke a mere n'ihi ihe ndị a:
Njehie na-apụta na usoro mmekọrịta. Dịka ọmụmaatụ, n'ihi njehie njikọ netwọk, a na-ehichapụ ihe ndị ahụ na desktọọpụ mana anaghị ebufe ha na ekwentị mkpanaaka nke ọma.
Mmetụta nke ngwanrọ mmekọrịta. Ọmụmaatụ, ActiveSync nwere ike ihichapụ kọntaktị na desktọọpụ gị Outlook ma ọ bụghị nyefee ha na ekwentị mkpanaaka gị.
N'ọnọdụ dị otú a, ị ka nwere ike ịgbake lost ozi ịntanetị na ihe site na DataNumen Outlook Repair, dị ka ndị a:
Gaa na kọmputa gị desktọọpụ.
Họrọ faịlụ PST maka Outlook na kọmputa desktọọpụ, dị ka isi iyi PST faịlụ ka edozi.
Rụzie isi iyi Outlook PST faịlụ. DataNumen Outlook Repair ga-enyocha ma weghachite ozi ịntanetị na ihe ndị ọzọ lost n'oge mmekọrịta n'etiti ekwentị mkpanaaka gị na kọmputa desktọọpụ.
Mgbe mmezi usoro, i nwere ike iji Outlook imeghe ofu PST faịlụ na-ahụ ihe niile lost ozi ịntanetị na ihe ndị ọzọ weghachitere na ọnọdụ mbụ ha.
Ọ bụrụ n ’ịnweghị ike ịchọta ihe ndị ahụ n’ebe edobere ha, ị nwere ike nwaa iji ụzọ ndị a chọọ ha:
1.1 Chọta ha na folda “Recoved_Groupxxx”. Ndị lost Enwere ike ịme ihe dị ka lost & achọtara ihe, nke enwetara ma tinye ya na folda akpọrọ "Recovered_Groupxxx" na faịlụ PST edoziri.
1.2 Ọ bụrụ na ị maara ụfọdụ njirimara nke ihe ndị achọrọ, dịka ọmụmaatụ, isiokwu nke email ahụ, ụfọdụ isiokwu dị na email ahụ, wdg, mgbe ahụ ị nwere ike were ihe ndị a dị ka nyocha ọchụchọ, ma jiri ọrụ ọchụchọ Outlook chọọ maka chọrọ ihe na ofu faịlụ PST niile. Mgbe ụfọdụ, lost ihe enwere ike weghachite ma tinye ya na folda ndị ọzọ ma ọ bụ folda nwere arbitrary aha. Site na ọrụ ọchụchọ Outlook, ị nwere ike ịchọta ha n'ụzọ dị mfe.
I nwere ike ichota oyiri ihe anaghi ehichapụ na folda “Recovered_Groupxxx”. Biko leghara ha anya. N'ihi na mgbe Outlook na-echekwa otu ihe, ọ nwere ike ịme ụfọdụ oyiri n'ụzọ zuru ezu. DataNumen Outlook Repair dị ike nke na ọ nwere ike weghachite akwụkwọ ndị a pụtara ma were ha dị ka lost & achọtara ihe, nke enwetara ma tinye ya na folda akpọrọ "Recovered_Groupxxx" na faịlụ PST edoziri.